Manchester City oo go’aan ka qaadatay u dhaqaaqista saxiixa Harry Kane – Gool FM
Ahmed Nur June 20, 2021
(Manchester) 20 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City oo si joogto ah loola xiriirinayay saxiixa xiddiga kooxda Tottenham Hotspur ayaa ugu dambeyn go’aan ka gaartay u dhaqaaqista soo xero gelinta laacibka Ingiriiska u dhashay.
Man City ayaa go’aansatay inay Spurs u gudbiso dalab gaaray 100 milyan oo gini oo ay ku dooneyso saxiixa Kane, balse waxaa dalabkaas barbar socda inaan laga gorgortameyn oo ay Tottenham lacagtaas qaadato ama ay iska heysato weeraryahankeeda.
Sida aan kasoo xigannay Daily Star, kooxda Etihad ku ciyaarta ayaa dalabkan ku jadwaleysay inay gudbiso marka uu dhammaado tartanka qarammada qaaradda Yurub si inta uga harsan suuqa xagaaga ay tukaameysi kale u sameyso.
Guddoomiyaha kooxda ka dhisan Waqooyiga London ee Daniel Levy ayaa goor hore u sheegay inaysan kooxdiisa ku iibineyn Kane qiimo ka yar 150 milyan oo gini, waxaana qiimahaas iyo dalabka ay qorsheysay Man City u dhexeeya lacag dhan 50 milyan.
Si kastaba ha ahaatee kooxda horyaalka difaacaneysa ayaa ka faa’ideysaneysa baahida Kane oo dhanka koobabka ah taasoo ah sababta uu u doonayo inuu kaga tago Spurs.
27-jirka kabtanka u ah xulka England ayaa si cad u ogeysiiyay kooxdiisa inuu doonayo inay fasaxdo xagaagan si uu ugu biiro kooxo kale isla markaasna uu u rumeeyo riyooyinkiisa dhanka koobabka.
Maxay tahay sababta uu Memphis Depay u neceb yahay inuu isticmaalo magaca 'Depay' isla markaasna maaliyadda ugu qorto kaliya 'Memphis'?